Khabiir Ku Xeeldheer Khariidadda Warqadda Wareejinta Ruushka Google Analytics
Spammers ayaa si joogto ah u kobcinaya noocyada cusub ee spamarka ee weerara Google Analytics. Xilligan, waxaa jiray warar laga helay Ruushka oo ka yimid Ruushka iyaga oo qaadanaya wakhti ay ku sameeyaan horumarinta spam ee soo ururin doona taraafikada. Waxaa jira afar nooc oo kala ah waxyaabo ay ka mid yihiin: falanqaynta, gawaarida, boodhka sharciyaysan iyo raadinta spam.
Hoos u dhig dhibaatooyinka khibradda leh ee ay bixiso khabiirka hoggaamiyaha ah Semt , Alexander Peresunko, kana ilaali spam gudbinta.
Waxa kale oo loo yaqaanaa gudbinta jinniga. Inkastoo aysan booqan goobta, waxay ku arkaan falanqaynta markaad garaacayso Google Analytics ID - app developers. Spamming wuxuu u dhacaa si qarsoodi ah, waxaana loogu talagalay in lagu yareeyo isticmaalaha kumbuyuutarka si loo furo boggaga gudbinta. Waxay badanaa ka soo jeedaan Ruushka.
Kuwani waa nooca spam kuwaas oo lagu gartaa dabeecaddooda ay ku leeyihiin macluumaadka ururinta internetka. Waxaa lagugula talinayaa in aad iska ilaaliso booqashada sababtoo ah khatarta fayruska markaa waa in la xakameeyo. Tusaalayaasha dab-damiska taraafiggu waa boogaha internet-ka ee spam.
Inkastoo inkastoo aan si caadi ah looma arkin falanqaynta, waxay mararka qaarkood ku faafaan mowduucyo si ay ugu muujiyaan matoorada raadinta
Spamadani dhab ahaantii ma booqan karaan boggooda internetka laakiin halkii ay ku gali lahaayeen xisaabtameynta falanqaynta ping ee isku dayga ah in ay isbaaraan bartilmaameedkooda. Raadinta spam waa la soo rogi karaa si looga hortago inay muujiyaan koontada falanqaynta
Cabbiraadyada xakamaynta spam
Inkastoo spams ay u muuqdaan in ay xiriir la leeyihiin website-yada, spams Ruush ma hubaan in ay galaan bogagga ay ku arkaan. Kuwa soo socda waa liis ka mid ah qaar ka mid ah xiriirada spam ugu caansan sida:
Inta badan xiriiradaasi ma tagaan website-ka dadka isticmaala laakiin halkii ay booqan lahaayeen dadka isticmaala Google Analytics. Xiriirintooda waxay muujinayaan natiijooyin falanqayneed kuwaas oo ku dayda inay isticmaalaan Google si ay u soo booqdaan boggooda internetka. Tusaalooyinka sida spamadani waa darrada iyo ilovevitality.com. Inkastoo spams aysan soo booqan goobta adeegsiga, waa lagama maarmaan inay ka hor istaagto inay muujiso natiijooyinka Google Analytics. Sababaha baahida loo qabo in lagu xakameeyo waxyaabaha soo galaya waa:
i. Waa lagama maarmaan in la helo xog sax ah oo ku saabsan tirada dadka booqanaya goobta mid ka mid ah si loo falanqeyn karo waxtarka. Macluumaadkani waa mid muhiim u ah go'aaminta heerka xajmiga iyo joogitaanka sifooyinka xogta la uruuriyay si loo baadho falanqaynta.
ii. Joogitaanka gawaarida si xun u saameeya qiimeynta mashiinnada raadinta. Jiritaanka spammers kuwaas oo si joogto ah u kobcaya noocyada cusub ee spamarka waxay u baahan yihiin jiritaanka shirkado sida Misfit si loola dagaallamo macallinimada oo ay ka dhigaan socodka ganacsiga yaryar.
Shakhsiyada gudbinta waxaa lagu dari karaa iyadoo la isticmaalayo liiska hubinta ee TL:
1. Qalabka Filtering Tool waxaa loo isticmaali karaa si looga hortago bots oo ka muuqda koontada Google Analytics adoo gujinaya "View Settings" iyo xulashada "filter filtering"
2. Dhamaan rikoodhka Ruushka ee Ruushku waa in lagu sifeeyaa iyada oo lagu darayo liisaska ka-reebitaanka gudbinta oo ay ka mid yihiin ikhtiyaarka filimka
a) Xaaladda joojinta spam gudbinta, booqo koontada Google Analytics oo dooro aaladda "Filter"
b) Xulo "Fadlan Cusub" oo ku qor magaca domainka
c) Nooca shaandhaynta, dooro habka caadada ah iyo dooro ikhtiyaarka gudbinta
d) Ku qor cinwaanka saxda ah ee aad rabto inaad ku xakameyso "Qalabka Farsamada"
e) Hannaanka sare ee kor ku xusan waa in lagu fuliyaa isla domain, laakiin xulashada "Filter field" waa inaad gujisaa magaca martida.
f) Habka isku midka ah ayaa lagu dabaqaa spam raadinta kaliya "Filter Field" waa in lagu badalaa "Ololaha Ololaha" iyo qaabkani waa erey macquul ah.
3. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagula talinayaa in warbixinta loo gudbiyo Google haddii ay jirto shaki ku jiro codsiyada xaasidnimada ah